IPV 6 Kutarisana nekuongorora - MY-IP-IS.com
MY IP IS - IPV6 Kubvumirana nekuongorora
Google iri kuunganidza zvinyorwa pamusoro pekugamuchirwa kwe IPv6 paInternet. Google inotarisira kuti kuparidzira ruzivo urwu kuchabatsira vatsigiri veIndaneti, vadzidzisi vepawebhuku, uye vanoita mitemo semabhizimusi anobudisa IPv6.
Yakawanda yekutengesa mitambo inoshandiswa pamusoro pe IP v 4, inosanganisira nhamba ina dzenhamba kubva ku0 kusvika ku255. Kune "chete" 4 mabhizimisi IPv4, kuti usashamise kunze kwemaateresi akawanikwa IPv6 yakagadzirwa, kuwedzera nhamba kusvika ku 340 trillion trillion trillion (2128).
Mumufaro uri pasi apa unogona kuona kubvumirwa kwepasi pose kwe IPV6
My IP iri ibasa rinopa ip address yako uye mamwe mashoko akawanda.
Dzidza zvakawanda pamusoro pe IP ma kero My Ip Is pane WikiPedia.